Xildhibaanad haween ah oo katirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ka badbaaday qarax wadada lagu aasay gudaha Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaXildhibaanad haween ah oo katirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ka badbaaday qarax wadada lagu aasay gudaha Muqdisho
June 7, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Xildhibaanad haween ah oo katirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ka badbaaday qarax wadada lagu aasay gudaha Muqdisho. [Sawirka: Archive]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Xildhibaanad haween ah oo katirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka badbaaday markii qarax wadada lagu aasay uu la kacay gaarigeeda gudaha Muqdisho caawa fiidkii, sida ay sheegeen ilo-wareedyo dhanka ammaanka ah.
Sida ay sheegeen ilo-wareedyadu, ugu yaraan mid kamid ah ilaaladeeda ayaa ku dhaawacmay weerarka.
Ma jirto koox sheegtay in ay iyagu ka dambeeyaan, balse ururka hubaysan ee Al-Shabaab ayaa weeraro kan lamid ah qaaday.
Inta lagu guda jiray bishaan barakaysan ee Ramadaan, ammaanka ayaa aad loo adkeeyay gudaha caasimada si looga hortago weeraro argagixiso oo ka yimaada maleeshiyada.